Information for Myanmar about Islam: 9/11 ရဲ့အဓိကတရားခံဘယ်သူလဲ?
September 11 ကတော့ ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီ... ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်စဉ်ကြီးကလည်း ၁၀ နှစ်တောင် ပြည့်ခဲ့ပါပြီ.... ဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးချင်တာက 9/11 ရဲ့အဓိကတရားခံဘယ်သူလဲ?
အရင် ဒီ Video လေးကို ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်-
My Video - DVD-Title1 - eSnips
001 : http://www.mediafire.com/?1e1p739jo4bnc2y
002 : http://www.mediafire.com/?0wssgyb5dgphaes
အထက်ပါ zip folder ၂ ခုကို ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီး zip ဖြည်ကာ Folder ၁ ခုထဲမှာ ပေါင်းထည့်လိုက်ရင် ပုံပါ အတိုင်း ဖိုင် ၄ ခု တွေ့ရလိမ့်မယ်.. gsplits ဆိုတဲ့ software ကို install လုပ်လိုက်ပါ.... ပြီးရင် ပွင့်လာတဲ့ software ကိုပိတ်ကာ folder ရှိ ၄ ဖိုင်ထဲမှ အပေါ်ဆုံးက disk1 icon ကို click နှိပ်လိုက်ရင် DVD-Title1 ဆိုတဲ့ mp4 ဖိုင်လေး တဖိုင်ရပါလိမ့်မယ်....
အထက်ပါ Video ဖိုင်လေးကို ကြည့်ပြီးရင်တော့ သူငယ်ချင်းတို့ အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ စဉ်းစား ချင့်ချိန်နိုင် ကြပါပြီ-
အခုကျနော်သိလာတာတွေကိုလည်း ပိုသေချာအောင် မျှမျှတတ စဉ်းစားတတ်တဲ့သူငယ်ချင်း နိုင်ငံရေး နှံ့စပ် သူများ ရှိရင်လည်း မေးမြန်းကြည့်ပါ။ သတင်းမှန်ကို သိလာပါလိမ့်မယ်။ youtube ထဲမှာ 9/11 များကို ရိုက်ကြည့် ပြီး လေ့လာကြည့်ပါ။ အထူးသဖြင့် သိပ္ပံပညာရှင်တွေက ဘာပြောသလဲပေါ့။
9/11 ဖြစ်ပြီးမကြာမှီ- နယူးယောက်က ကျွန်တော့ မိတ်ဆွေတစ်ဦးပြန်လာတော့- သူ့ဆီမှာ စီဒီခွေတစ်ခုပါလာ တယ်။ နယူးယောက်က ရထားဘူတာတွေမှာ (အလကား) လိုက်ဝေတာတဲ့- အဲ့ဒီ အခွေထဲမှာ- အဆောက်အဦး ကြီးပြိုကျတဲ့စနစ်၊ ပင်တဂွန်မှာကျတဲ့ လေယဉ်ရဲ့ အင်ဂျင် အားလုံးကို တွက်ပြထားတယ်။ မှတ်မိသလောက်နဲ့ လက် ရှိအခြေအနေအားလုံးကို တတ်နိုင်သမျှ ပြန်ပြောပြမယ်။- အကုန်လုံး စဉ်းစားလို့ရအောင်ပါ။
(၂) အဲ့ဒီအောက်က အဆောက်အဦးပြိုစေဘို့ ဗုံး ၁၃ လုံးကွဲတယ်။ (ဖုံးထားတဲ့ သတင်း- နောက်ပိုင်း ပေါ်လာမယ်)
(၃) ဒုတိယလေယဉ်တိုက်ဘို့ မီနစ် ၃၀ ကွာတယ်။ အဲ့ဒီ ပထမလေယဉ်တိုက်တော့ သမ္မကြီးကို အကြောင်း ကြား တယ်။ သမ္မတကြီးက အရေးယူဘို့ မပြောဘူး။ ဖလော်ရီဒါမှာရှိတဲ့ မူလတန်းကျောင်းလေးမှာ ကလေးတွေ ရွတ်ဆို နေတဲ့ ကဗျာများကို ဘာမှ မဖြစ်သလို ဆက်လက်နားထောင်နေတယ်။
(၅) သမ္မတကြီးက ဖလော်ရီဒါမှာပြောခဲ့တဲ့စကားများနဲ့ ၀ါရှင်တန်မှာပြောတဲ့စကား ရှေ့နောက်မညီလို့ သ တင်းထောက်တွေက ၀ိုင်းမေးတာကို ပြန် မဖြေနိုင်ခဲ့ဘူး။
(၆) ပင်တဂွန် စစ်ဌာနချုပ်မှာ လေယဉ်တစ်စီးကျတယ်။ အဲ့ဒီ လေယဉ်အင်ဂျင်ကို အ၀တ်နဲ့အုပ်ပြီး ထမ်းထုတ် သွား တာ- လူလေးယောက်ပဲ ဖြစ်တယ်။ သူတို့ ပြောတဲ့ ခရီသည် လေယဉ်ဆိုရင် အင်ဂျင်ကို လူလေးယောက် ထမ်း ထုတ်လို့ မနိုင်ဘူး။ သတင်းထောက်တွေကို အဲ့ဒီ လေယဉ်အင်ဂျင် အပိုင်းအစများကို ဓါတ်ပုံရိုက်ခွင့် မပေးဘူး။
(၇) ပစ်ချလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ လေယဉ်ကတော့ သတင်းလောက်ပဲ ပါတယ်။ ဘာလေယဉ်မှန်း မသိဘူး။ (ပြော တော့ ခရီးသည်တင် လေ ယဉ်လို့ ပြောတယ်။
လေယဉ်နဲ့ မတိုက်မှီ တစ်လ အလိုက အမေရိကန်နိုင်ငံ နယူးယောက်၊ မင်ဟယ်တန် (အဆောက်အဦး ရှိရာမြို့) အနီးမှာ ဒီအဆောက်အဦးကို စက်တင်ဘာလအတွင်း မနက် ၉ နာရီ မတီးမှီ မလာပါနဲ့လို့ ကြိုတင်စာဖြန့်ဝေတယ်။ အဲ့မှာရှိတဲ့ မြန်မာတွေလည်း အဲ့ဒီစာကို ရခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီမြို့ထဲမှာ မြန်မာပြည်သား တရုတ်လူမျိုးပိုင်တဲ့ sun hotel ရှိ တယ်။ မြန်မာသင်္ဘောသားတွေ အများစု တည်းခိုတယ်။ ကျွန်တော့မိတ်ဆွေ သင်္ဘောသားတစ်ဦးလည်း အဲ့စာကို ရခဲ့တယ် ပြောတယ်။-
အဆောက်အဦးမှာ ဂျူးလူမျိုးတွေ ထောင်ချီပြီး အလုပ်လုပ်ကိုင်တယ်။ မြန်မာတွေလည်း ရှိတယ်။ မူဆ လင်တွေလည်း ရှိတယ်။ ၀န်ထမ်းတွေပါ။ တကယ်ဖြစ်မယ့်နေ့မှာ ၀န်ထမ်းဂျူး အဲ့သည်ဂျူး တစ်ယောက်မှ အ ဆောက်အဦးကို မလာခဲ့ဘူး။ ဒါကြောင့် သေတဲ့ အထဲမှာ ဂျူး တစ်ယောက်မှ မပါခဲ့ဘူး။
ဖြစ်သွားပြီးနောက်ပိုင်း-- အမှုကို စစ်ဆေးဘို့ ခုံးရုံးဖွဲ့ခဲ့တယ်။ အဖွဲ့ ဥက္ကဌက ယခင်အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေး ၀န် ကြီးဟောင်း ဟင်နရီ ကက်ဆင်းဂျား ဖြစ်တယ်။ သူက အမှုကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရင်း- အမှုက ဂျူးတွေနဲ့ အမေရိကန် အစိုးရပိုင်း ထိပ်သီးတွေဆီကို ပတ်လာခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် ဒီအမှုကို သူ ဆက်လက် မကိုင်တွယ်တော့ပါဘူးလို့ တ ရားဝင်ကြေငြာပြီး နှတ်ထွက်သွားခဲ့တယ်။ အခုအချိန်ထိ အမှုက တန်းလန်းကြီး ဖြစ်နေပါတယ်။
အမေရိကန်အစိုးရက ထိုးချတဲ့ (လေယဉ်ထဲပါ အသေခံတိုက်သူ) မုဟမ္မဒ် အာ့ခ်တားက- သူဟာ အီဂျစ်မှာ ရှိ နေပါတယ်။ ကျောင်းတက်နေပါတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ စွပ်စွဲတာ လူမှားနေပြီလို့ ပြောပါတယ်။ (သူ ကတော့ အမေရိကန်ကို လာခဲ့တယ်။ ပြန်ခဲ့တာ ၈ လရှိပါပြီတဲ့)။
အမေရိကန်အစိုးရက ဘင်လာဒင်ကို ထိုးချတယ်။ သူက အာဖဂန်ကို ၀င်ချင်တယ်လေ။ အာဖဂန်ကို ဘာကြောင့် ၀င်ချင်ရသလဲ။ သူက ကာဇက်စတန်က ရေနံနဲ့ ဂစ်ကို သယ်ယူဘို့ အာဖဂန်ကို ပိုက်လိုင်း ဖြတ်ဖေါက်ရမယ်။ ဒါကြောင့် တာလီဘန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကို နယူးယောက်ကို ခေါ်ယူပြီး ဆွေးနွေးခဲ့ တယ်။ အကောက် ခွန်ကိစ္စ အပေးအယူ မတည့်ခဲ့ဘူး။ ပြီးတော့ အာဖဂန်က ကြေးနီးနဲ့ ယူရေနီယံ ထွက်တယ်။ အာဖဂန်ကို သူ့သြ ဇာ သွပ်သွင်းနိုင်ရင် တရုတ်နဲ့ ရုရှားကိုလည်း လှမ်းထောက်ထားလို့ ရတယ်။- (တွက်ထားတာတွေကတော့ မျိုးစုံ ပေ့ါဗျာ)။
အမေရိကန်နိုင်ငံတွင်းမှာ နောက်ကွယ်က ကိုင်ထားတဲ့ ဂျူးတွေ ကိုလည်း အမေရိကန်လူမျိုးတွေက အတိုးကြီး စားမှုနဲ့ မုန်းတီးမှု မြင့်တက်လာခဲ့တယ်။ ဂျူးတွေကလည်း သူတို့ကို မုန်းမယ့်အစား မူဆလင်ကိုမုန်းဘို့ အာရုံ လွှဲ ချင်တယ်။ (ဂျူးအားလုံးတော့ မဟုတ်ဘူးနော်- အဓိက ကြိုးကိုင် ဇီယွန်ဝါဒီတွေပါ)။ ဒီနှစ်ခု ပေါင်းစပ်ပြီး ဘင်လာဒင်ကို ထိုးချလိုက်ရင် ဘင်လာဒင် ခိုလှုံ နေတဲ့ အာဖဂန်ကို သူတို့ တိုက်လို့ ရမယ်လေ။
အာဖဂန် ခေါင်းဆောင် မူလာအိုမာက - ဘင်လာဒင် ဖြစ်ကြောင်း တိကျတဲ့ သက်သေပြပါ။ တိကျခဲ့ရင် ငါကိုယ် တိုင်ဖမ်းပြီး မင်းတို့လက်ထဲကို အပ်မယ်လို့ ပြောခဲ့တယ်။ သူတို့ကတိကျတဲ့ သက်သေမပြနိုင်ဘူး။ (အာလ်ဂျဇီး ရာဟ် တသင်းဌာနက တရားဝင်ပြောခဲ့တယ်။) နောက်ဆုံး ဘင်လာဒင်ကို သူတို့ အရှင်ဖမ်းမိတယ်။ (မကြာသေး မှီကပါ) ဒါပေမယ့် အသေမိတယ်ပြောပြီး အလောင်းဖျောက်ပစ်လိုက်တယ်။ (အဖြေက ရေထဲကို ပစ်ချလိုက် တာတဲ့)။ အထူးလေ့ကျင့်ထားတဲ့ အထူးကွန်မင်ဒို ၁၀ ယောက်က တိုက်ခန်းထဲမှာ လှောင်ပိတ်နေတဲ့ (တောထဲ မှာလို ထွက်မပြေးနိုင်တဲ့) လက်နက်မဲ့ လူတစ်ယောက်ကို အသေမိတယ်ဆိုတာကော ယုတ္တိရှိရဲ့လား။ အရှင်ဖမ်း ပြီး လူသိရှင်ကြား ခုံရုံးတင်ပါလား။ ဒီတော့ အမှုက အမှန်ပေါ်လာမယ်လေ။ ဒီလို အဖြစ်မခံနိုင်တော့ နှတ်ပိတ် လိုက်တာပေါ့။ ဘင်လာဒင်ရဲ့ ရန်သူတော်ကြီးလို့ သိထားတဲ့ သမ္မကြီး ဂျော့ဘုခ်ျက “ဘင်လာဒင် သေပြီဆိုပြီး ကြည်နူးမနေသင့်ဘူး၊ သူဟာ တရားခံအစစ် ဖြစ်တယ် မဖြစ်ဘူးဆိုတာ ခုံရုံးတင် စစ်ဆေးခြင်း မပြုရသေးသလို၊ ဆုံးဖြတ်ချက်လည်း မချရသေးဘူး၊ ငါကတော့ ဘယ်ထောက်လှမ်းရေးကိုမှ အယုံ အကြည်မရှိဘူး၊” လို့ ဖလော် ရီဒါ- သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောသွားတာ မကြာသေးပါ။ what Bush said about Bin Ladin ဆိုပြီး နက်မှာ ရှာကြည့်ပါ။
အဓိက အကျဆုံး နောက်တစ်ချက်က- အီရန်သမ္မတ အမာဒီနဂျစ်က ၂၀၁၀ ကုလသမဂ္ဂ ကွန်ဖရင့်မှာ- 9/11 ဟာ လုပ်ဇတ်ဖြစ်တယ်။ အမေရိကန်က မူဆလင် နိုင်ငံတွေကို ကျူးကျော်လိုလို့ ဇတ်လမ်းဆင်ခဲ့တာ ဖြစ်တယ် လို့ နယူးယောက် ကုလရုံးမှာ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများ အားလုံးရှေ့မှာ ဗြောင်ပြောခဲ့တယ်။ ဒါကို သမ္မတ အိုဘားမားက စကားကို မဆင်မခြင် ပြောတယ်လို့ပြောတော့- သူက ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ ကုလသမဂ္ဂကို ခုံရုံးဖွင့်ခိုင်းပြီး ဒီကိံစ္စကို စစ်ဆေးပါ။ ကျုပ်တို့ဆီမှာ အဆောက်အဦးကို အောက်က ဗုံး ၁၃ လုံးခွဲခဲ့တဲ့ အချက်အလက် အထောက်အထား အပြည့်အစုံရှိတယ်လို့ ပြန်ပြောတယ်။ သမ္မတအိုဘားမားက ဘာမှ မပြောနိုင်ဘူးလေ။ အီရန်သမ္မတဟာ အ ဆောက်အဦးပျက်နားကို ကိုယ်တိုင်သွားခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီမှာ သူ့ကို ကြိုဆိုသူတွေအများကြီးပါ။ အထောက်အထား အများကြီးကိုလည်း သူ့ကိုပေးခဲ့တယ်။ ဒါကို အမေရိကန်မီဒီယာတိုင်း (အထူးသဖြင့် နယူးယောက်မှာ ကျက်စား တဲ့ သတင်းဌာနတိုင်း သိပါတယ်။) ဘာဖြစ်လို့ ဒီကိစ္စတွေကို ဖုံးကွယ်ထားတာလဲ။- ကဲ ဒီလောက်ဆို စဉ်းစားလို့ ရမယ် ထင်ပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာ အထောက်အထားတွေကိုတော့ ကျွန်တော် အခုပြောတာထဲက သိချင်တဲ့ အပိုဒ်များကို အင်္ဂလိပ်လိုအဆင်ပြေသလို ပြန်ပြီး gooole မှာ ရှာကြည့်ပါ။ အများစုကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
9-11 American Human Rights Final
ဟော်လီးဝုဒ်ကပြောတဲ့ ၉-၁၁ ဇာတ်လမ်း (ကလစ်နှိပ် ဖတ်ပါ)
Credit: MMSY (မြန်မာမွတ်စလင်မ် ကျောင်းသားလူငယ်များ) မိသားစုမှ စုပေါင်းဆောင်ရွက်ထားသော ပရောဂျက်တခုဖြစ်ပါသည်။
Posted by A Muslim at 2:36 AM
Labels: ရုပ်သံ, ထောက်ပြ ဝေဖန်ချက်